...nokarakarain’ny vondrom-bavaka iray tao amin’ny kianjan’i Tsarasaotra Antsirabe, saingy fahafatesana no hita.
Nipoahana karazana afomanga mantsy ny pasitera iray, izay vao 31 taona monja, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
« Vao avy nirehitra mihitsy ilay afomanga dia niparitaka taminy ka potipotika ny tarehiny sy ny tanany », hoy ny fitantaran’ny mpivavaka iray nahita ny zava-nisy. Tsy nahatsiaro tena ilay pasitera ka noezahina naterina tany amin’ny hopitaly tsy miankina iray ao an-toerana, saingy tsy tana intsony ny ainy.
Araka ny fitantaran’ireo nanatri-maso ity hetsika ara-pivavahana notanterahina ny 2 ka hatramin’ny 4 jona teo ity dia misy hatrany ny fanapoahana afomanga ho famaranana ny fotoam-bavaka iarahan’izy ireo.
Tsy nisy olana izany nandritra ny roa andro voalohany asingy tamin’ny andro farany dia izao namoa-tsampona izao. Pasitera, mpiandraikitra ny lafiny ara-pitaovana ity niharam-boina ity. « Natao indrindra ho fampandrenesana ny marenina sy fampahitana ny jamba no nokendrena tamin’izany », hoy ny mpino iray.
Nilaza ny pasitera iray, isan’ireo tompon’andraikitr’ity vondrom-bavaka ao Antsirabe ity fa efa nampoizin’ity namoy ny ainy mialoha io tranga io. « Nangataka ny halaina sary farany izy nandritra ny toriteniny tamin’io andro io. Tranga izay tena nahagaga sy nanaitra any », hoy izy nitantara.